HomeWararka CiyaarahaAgaasimaha kooxda Juventus Fabio Paratici oo beeniyey wararka sheegaya in C.ronaldo ku biiri doona midkood kooxaha Man United iyo Real Madrid
Kooxda heysata horyaalka Serie A, agaasimaha Juventus Fabio Paratici ayaa sheegtay in Cristiano Ronaldo uusan ka tagi doonin kooxda mustaqbalka dhow.
35 jirkaan ayaa ku guuleystay inuu shabaqa soo taabto 73 jeer 95 kulan oo uu u saftay kooxda heysata horyaalka Talyaaniga tan iyo markii uu ka yimid kooxda ka dhisan La Liga Real Madrid, oo ay ku jiraan sideed gool lix kulan oo saftay xilli ciyaareedkan 2020-21.
Xiddiga reer Portugal ayaa heshiis kula jira Old Lady ilaa xagaayga 2022, si kastaba ha noqotee, Manchester United iyo Real Madrid labadaba waxaa lagu xamanayay ayaa doonayaa xidiga.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa soo sheegeysa in weeraryahankii hore ee Sporting Lisbon uu wadahadalo kula jiray shaqsiyaad sar sare ee garoonka Bernabeu si uu ugala hadlo suurtogalnimada ku laabashada kooxda reer Spain.
Si kastaba ha ahaatee, Paratici ayaa qashinka ku shubay wararka sheegaya in weeraryahanku ka tagayo kooxda kuna biiri doono Man Utd iyo Real Madrid.
“Waxaan kaa xaqiijin karaa mustaqbalka Cristiano Ronaldo oo ahaan doono kooxda Juventus,” Paratici ayaa u sheegay DAZN. “Ahmiyad badan ma siino gudbinta wararka xanta ah, waxaa jira warar badan maalin kasta.”
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay labo gool kulankii ay Juve 2-0 kaga badisay Cagliari ee Serie A Sabtidii welina wuxuu ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican inkasta oo uu da ’yahay.